Ohabolana : afaka 1 2
Ohabolana 20 Adidinao tsy namangy , fa ny aretiko afaka ihany. [Veyrières 1913 #1045, Cousins 1871, Houlder 1895]
Ohabolana 46 Afaka ny loza , fa tonga ny antambo . [Veyrières 1913 #2683]
Ohabolana 49 Afatotra maninton- tady , ampandehanina tsy afaka . [Rinara 1974]
Afatotra manito tady , ampandanin-tsy mahalany . [Veyrières 1913]
Afatotra manito tady , ampandanin-tsy mahomby . [Veyrières 1913]
Ampandehanina tsy mahomby , afatotra maninton-tady . [Rinara 1974 #186]
Ohabolana 115 Akohokely latsaka an-kady : haneno moa kely feo , hanidina kely hery ; hitoetra ihany, matahotra ny kary . [Rinara 1974]
Akoho kely latsaka an-kady : hiantso , kely feo ; hanidina, tapaka elatra ; hitoetra ihany, manin-dreny . [Veyrières 1913 #2579, Cousins 1871]
Akohokely latsaka an-kady : hiantso , kely feo ; hanidina, tapak' elatra ; hitoetra ihany, manina ny reniny. [Houlder 1895]
Akoho kely latsaka an-kady : hisarangotra , tsy afaka ; hiantso , kely feo . [Veyrières 1913 #2580]
Akohokely latsaka an-kady : hisarongatra , tsy afaka ; hiantso , kely feo ; hitoetra ihany, matahotra ny kary . [Cousins 1871]
Akohokely latsaka an-kady : hisarongatra , tsy afaka ; hiantso , kely ieo ; hitoetra ihany, matahotra ny kary . [Nicol 1935 #359]
Ohabolana 500 Andro ahamaizan' ny trano mitondra afo am-bilany kely, fa nony ampitso manao fanilo miohatra ny loha . [Rinara 1974]
Andro hamaizan' ny trano dia manao afo am-bilany kely, fa rahampitso manao afo am-borodamba . [Houlder 1895 #724]
Ohabolana 887 Aza hitsahinao re ny lambako, fa ny manantsody manira no tsy afak . [Houlder 1895 #794, Cousins 1871 #386, Veyrières 1913, Rinara 1974]
Aza tontaina ny lamba, fa ny manantsody manira no tsy afaka . [Cousins 1871 #718]
Aza tontainao re ny lambako fa ny manantsody manira no tsy afak . [Rinara 1974 #55]
Ohabolana 1259 Aza mandray ombalahy latsaka an-tatatra , fa raha afaka izy, manoto . [Veyrières 1913 #6218]
Aza mandray ombilahy latsaka an-tatatra , fa raha afaka izy, manoto . [Houlder 1895 #1155]
Tandremo, fandrao toy ny mandray ombilahy latsaka an-tatatra : raha afaka izy, hanoto . [Cousins 1871 #3001, Nicol 1935 #310]
Tandremo sao manarina ombalahy latsaka an-tatatra , ka raha tafarina izy manoto . [Rinara 1974 #4034]
Ohabolana 1290 Aza manirina olona tsy afaka aina . (;. [Rinara 1974 #686, Cousins 1871 #581, Rajemisa 1985]
Aza manirina olona tsy afak' aina . [Veyrières 1913 #3170]
Aza manirina olon-tsy afaka aina . [Houlder 1895 #832]
Ohabolana 1322 Aza matin' ny hoe samy Raivo , fa ny iray Raivo tsy afaka an-trano ary ny iray Raivo tia tranon' olona . [Rinara 1974]
Aza matin' ny hoe " samy Raivo " : ny iray Raivo tia tranon' olona , ary ny iray Raivo tsy afaka an-trano . [Houlder 1895 #1751, Veyrières 1913 #1756, Cousins 1871 #591]
Ohabolana 1536 Aza tobatobaina ny vary , fa ny misambo- -bary manetsa no tsy afaka . [Houlder 1895 #793, Veyrières 1913 #2357, Cousins 1871 #714]
Aza tobatobaina ny vary , fa ny mitsidika an-tranon- -drafy no tsy toha . [Veyrières 1913 #2358]
Ohabolana 1661 Bevohoka tia tsakotsako : ny andro iray no tsy ho afaka . [Veyrières 1913 #759, Cousins 1871 #760]
Ohabolana 1826 Doko-dahy nisasa: ny tseroka no afaka , fa ny hamaintisana tsy miova. [Cousins 1871 #856]
Ohabolana 1921 Fahoriana tsy ho afaka va iny, ka dia handry aman-tany ? [Veyrières 1913 #2598, Cousins 1871 #884]
Fahorian-tsy ho afaka ve iny ka dia handriana amin' ny tany . [Rinara 1974 #1056]
Ohabolana 2048 Fatakana afak’ ando, mivika tsy amin’ aretina. [Samson 1965 #F19]
Ohabolana 2050 Fatakana volon-dambo ; tenina volon’ amboa : tsy ny atao , vita , tsy ny alàna, afaka fa Zanahary mandidy . [Samson 1965 #F20]
Ohabolana 2067 Fatra-pitady ny hofany, ka manary ny tenany be. [Houlder 1895 #1671]
Ohabolana 2122 Fita-mora tsy afaky ny omby. [Cousins 1871 #970, Rinara 1974]
Ohabolana 2130 Fitia nalain' ny kibo ka na hitanam-parango aza tsy afaka . [Rinara 1974 #1178]
Ohabolana 2231 Hadivorin' Andrianentoarivo : marivo loatra, afaka ny fahavalo , lalin-doatra fandriky ny tena . [Rinara 1974]
Hadivorin’ Andrianentoarivo : marivo loatra, afaky ny tafika ; lalin-doatra , fandriky ny tena . [Cousins 1871 #1001]
Hadivorin' Andriantoarivo : marivo loatra, afaky ny tafika ; lalin-doatra , fandriky ny tena . [Houlder 1895]
Ohabolana 2633 Izaho tsy mikapa an-tenantenan-taolana , tsy mandrefy hazo mijoro, tsy manintsana ny maintimolaly , tsy manozongozona ny mafy , nefa raha tokony tsy ho afaka izaho alaina . [Rinara 1974 #1471]
Izaho tsy mikapa an-tenatena taolana , tsy mandrefy hazo mijoro, tsy manintsana ny maintimolaly , tsy manozongozona ny mafy ; nefa raha tokony tsy ho afaka , izaho alaina . [Veyrières 1913 #5180, Cousins 1871 #1171]
Ohabolana 2777 Jorerilahy merika andro : ny tsy afaky ny vavany ailiky ny elany . [Rinara 1974 #1571]
Jorerilahy merika andro: ny tsy afaky ny vavany hailiky ny elany . [Cousins 1871 #1218]
Ohabolana 2917 Kitapo afak’ entana : tsy tsaroan’ ny olona intsony. [Nicol 1935 #494]
Ohabolana 2981 Lalana afaka ando : diavin' ny osa. [Houlder 1895 #906]
Lalana afak' ando , diavin' ny osa . [Cousins 1871 #1300, Rinara 1974]
Lalan' afak' ando diavin' ny osa . [Veyrières 1913 #772]
Ohabolana 3050 Langato nandro, dronga nisetra : ny lailay afaka fa ny taketra tavela . [Samson 1965 #L27]
Ohabolana 3395 Mamaky vilany an-tsena : manalady, mandoa vola kely ihany ; miezaka maina , afaka ihany. [Veyrières 1913 #4389, Cousins 1871]
Ohabolana 3500 Manan-jandry , afaka olan' entana , manan-joky , afaka olan-teny . [Rajemisa 1985]
Manan-joky , afaka olan-teny ; manan-jandry afaka olan’entana . [Veyrières 1913 #149, Nicol 1935 #14, Rajemisa 1985]
Manan-joky , afak' olan-teny ; manan-jandry afak' olan' entana . [Houlder 1895 #1901]
Ny manan-joky , afaka olan-teny ; ny manan-jandry , afaka olan' entana . [Rajemisa 1985]
Ohabolana 3586 Manao ohatra ny mpitrosa mahay: anio tsy mamoa-javatra , ampitso mifehy trano , afak’ ampitso lasan-davitra . [Cousins 1871, Rinara 1974]
Ohabolana 3643 Manarina ombalahy latsaka an-tatatra : nony afaka izy nanoto . [Rinara 1974 #2036]
Ohabolana 3679 Mandehana dieny malaina , fa raha mazoto tsy afaka . [Cousins 1871 #1582]
Mandehana dieny malaina , fa raha mazoto tsy afaka intsony. [Houlder 1895 #677]
Mandehana dieny malaina , fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. [Rinara 1974]
Miasà dieny malaina , fa raha mazoto tsy afaka intsony. [Nicol 1935 #399]
Ohabolana 3748 Mandroso afo tsy mirehitra ka afaka adidy amin' ny fatana . [Rinara 1974 #2083]
Ohabolana 3911 Masom-poza : malala-tsy afaka . [Samson 1965]
Ohabolana 3940 Maty aho basin' janako : mbola tsy napoakao indray mandeha akory, ka afaka ny sofiny . [Veyrières 1913 #924, Cousins 1871 #1660]
Ohabolana 4260 Miohatra ny tokonana tsy afaka , ka miohatra ny rindrina vao afaka ! [Houlder 1895]
Ohabolana 4789 Nanasa vahiny tsy tonga: sady voky no afaka adidy . [Rajemisa 1985]
Ohabolana 4862 Ny aina tsy afaky ny tompony . [Cousins 1871 #2127, Nicol 1935 #469]
Ny aina tsy matin-tompony . [Rinara 1974 #183]
Ohabolana 5084 Nify hanin' ny olitra ka ny alana ihany no mahatsara azy. [Rinara 1974]
Nify hanin' ny olitra : ny afaka ihany no odiny. [Rajemisa 1985]
Ohabolana 5101 Nify sy molotra, ka ny mahery no afaka aloha. [Houlder 1895 #382]
Ohabolana 5103 Ny fitia alain' ny maso , raha jeren' ny maso afaka ihany, fa ny fitia alain' ny kibo na hitanam-parango aza tsy afaka . [Rinara 1974 #2995]
Ny fitia alain' ny maso , raha jeren' ny maso , afaka ihany ; fa raha fitia alain' ny kibo , na dia itanam-parango aza, tsy afaka intsony. [Veyrières 1913 #5115, Cousins 1871]
Ohabolana 5127 Ny fo rano mafana , ka manao ny tsy lefitra. [Veyrières 1913 #5667]
Ny fo rano mafana , ka manao ny tsy lefitra : raha manao izany, ny anay dia vady afaka . [Veyrières 1913 #1392]
Ohabolana 5134 Ny hafaladia no afaka fa ny hatenda no sisa . [Rinara 1974 #197]
Ny hafaladia no afaka , fa ny havava no sisa . [Houlder 1895 #1216, Veyrières 1913 #3286, Cousins 1871 #2244]
Ny hakitrokely no afaka , fa ny hafaladia no sisa . [Veyrières 1913 #3211]
Vao ny hafaladia no lasa , fa ny impolo mandifotra olona mbola ho avy. [Veyrières 1913]
Ohabolana 5178 Ny henatra tsy afaka aman' ombelona . [Veyrières 1913 #6459]
Ny henatra tsy mba miala aman' olombelona . [Veyrières 1913 #6460]
Ohabolana 5319 Ny mangidihidy tsy afaky ny lavitra. [Rinara 1974 #3114, Cousins 1871 #2326]
Ohabolana 5468 Ny rariny no singam-bolo mandavo ny vositra , rohy mora tsy afaky ny omby . [Veyrières 1913 #3393, Cousins 1871 #2400]
Ohabolana 5669 Nivadika ny rasa, fa ny atiny no afaka aloha. [Veyrières 1913 #2732, Cousins 1871 #2111]
Ohabolana 5683 Ny varavarana tsy afaka ka ny rindrina hindahana . [Samson 1965 #N18]
Ohabolana 5811 Ombalahy aho afaka teo. [Houlder 1895 #811]
Ohabolana 6130 Raha ny tianao no hatao : avia rey ambanilanitra , fa raha ny an' olona kosa : tsy afaka aho fa be lohalika ! [Rinara 1974]
Ohabolana 6148 Raha sendra afak' afo ve dia afolahy , nefa ny rahampitso tsy mbola azo antoka . [Rinara 1974 #3654]
Ohabolana 6171 Raha tsarovanareo , afaka alahelo . [Veyrières 1913]
Ohabolana 6188 Raha tsy ny lehilahy no misaotra , tsy afaka ny vavy . [Veyrières 1913 #1402]
Ohabolana 6206 "Raikitra terý izao!" hoy ilay voa bala tamin' ny feny, "fa afaka ho borozano aho raha tonga" . [Houlder 1895]
Ohabolana 6261 Rano an-tsofina : raha tsy ampiana , tsy afaka . [Veyrières 1913 #4450]
Ohabolana 6357 Rohy malemy tsy afaky ny omby . [Houlder 1895 #2262, Cousins 1871 #2801]
Ohabolana 6727 Tahaka ny jorery ny fanompoana, ka na dia tapaka aza ny tongony aman-tanany mbola mimenomenona ihany izy. [Houlder 1895 #1525]
Tahaka ny jorery ny fanompoana , ka na tapaka aza ny tongony aman-tanany , mbola mimenomenona ihany. [Rinara 1974]
Tahaky ny jorery ny fanompoana ; ka na dia tapaka aza ny tongony aman-tanany dia tsy mbola miova ihany ny feony . [Veyrières 1913 #395]
Ohabolana 6754 Taim-boalavo latsaka am-bolo ngita : raha tsy maria ranonorana tsy afaka . [Houlder 1895 #2167, Veyrières 1913 #3301, Cousins 1871 #2971]
Ohabolana 6841 Tandrok' omby sondenda, ka ny tondro-maso akaiky no tsy afaka . [Rinara 1974 #4037]
Toy ny tandrok' omby sondenda, ka ny tondro-maso akaiky no tsy afaka . [Houlder 1895 #1123]
Ohabolana 7136 Toy ny kitapo afaka entana , ka tsy tsaroan' ny olona intsony. [Houlder 1895]
Toy ny kitapo nahafahan' entana : ka hadinodino (tsy tsaroana ) nony foana ny atiny. [Rinara 1974 #4296]
Ohabolana 7250 Tombom-barotra hita: fo afaka . [Houlder 1895 #1196, Veyrières 1913 #4407, Rinara 1974 #4172, Cousins 1871 #3118]
Ohabolana 7612 Tsy mba ny ravoravo natentina , fa ny tandra vadin-koditra . [Houlder 1895 #1359]
Tsy mba taniravo atentina , fa tena tandra vadin' ny hoditra . [Veyrières 1913 #5316, Rinara 1974 #4562, Cousins 1871 #3398]
Tsy ny taniravo natentina afaky ny rano , fa ny tandra vadin-koditra enti-milevina . [Rinara 1974 #4780]
Ohabolana 7741 Tsy misy hidy tsy afaka alàna, na hena tsy afaka am--bilany . [Rinara 1974 #4714, Cousins 1871, Houlder 1895, Veyrières 1913, Nicol 1935]
Ohabolana 7941 Vady afaka tsy asesy . [Samson 1965 #V1]
Ohabolana 7996 Valala samborim-boka : na tsy afak' aina eo no ho eo aza, dia. [Veyrières 1913]
Ohabolana 8289 Vohitra tototr' antsanga , afaky ny kary . [Veyrières 1913 #4333, Rinara 1974 #5008, Cousins 1871 #3720]
Vohitra tototr' antsanga ka afaky ny kary . [Houlder 1895 #2207]
Ohabolana 790 Aza arianao re ny variko , fa ny mitombo-doha manariva no tsy afak . [Cousins 1871 #386, Veyrières 1913]
Ohabolana 893 Aza isaoranao re ineny , fa ny mitoetra amin-drenikely no tsy afak . [Veyrières 1913 #902, Cousins 1871 #389]
Aza isaoranao re , ineny , fa ny mitoetra amin-drenikely no tsy tantiko. [Rinara 1974]
Ohabolana 1908 Fadin-dambo amin' amboa . [Veyrières 1913 #3075]
Tsy afa-dambo amin' amboa . [Veyrières 1913 #3075]
Ohabolana 5095 Ny fingadongadonao dia soa fa ny henamaso anao raha tonga no tsy tanty . [Rinara 1974 #2990]
Ny fingodongodonao dia soa , fa ny henamaso anao raha tonga no tsy afak . [Houlder 1895 #1769, Veyrières 1913 #3048]